विविध Archives - inaruwaonline.com
देशभरि नै नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनले माहोल तताएको छ। अझ नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने सुनसरी जिल्लामा महाधिवेशनको छुट्टै रौनक देख्न पाईन्छ। यतिबेला चोक चोक देखि चिया पसल सम्म काँग्रेसको महाधिवेशन र उम्मेदवारी बाहेक अन्य कुरो सुन्न पाईन्न। सबैले आफुलाई योग्य सम्झिने पदकालागि दावि गर्दै भोट माग्न व्यस्त देखिन्छन्। यसै क्रममा डा. बालकृष्ण साह पनि नेपाली कांग्रेसको हुन गैरहेको १४ औ महाधिवेशन संग जोडि...
राजनीतिले नागरिक अनि राज्यलाई जोड्छ । राजनीति नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन समाजमा लुकेको शक्तिको खोज, संकलन, प्रस्फुटन गर्ने विज्ञान हो । जहाँ नागरिकको आवश्यता हुन्छ, त्यहाँ राजनीति हुन्छ । हाम्रो जीवनस्तरलाई उकास्ने अनि व्यवस्थित गर्न पत्रकारितालाई ‘ब्याकग्राउण्ड’ बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका धेरै पत्रकार खुलेरै राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेका छन् । सक्रिय पत्रकारितालाई त्यागेसँगै राजनीतिमा सम्भावना देख...
अहिले कोभिड-१९ को कारणले विश्व नै आतंकित भइरहेको अवस्थामा नेपालमा निजि लगानीमा स्थापित कम्पनीबाट संचालित विद्यालयका संस्थापक र शिक्षकहरु बीच एक प्रकारको संघर्ष चलिरहेको छ । यस्तो नहुनुपर्ने ठाउँमा, अझ शिक्षकहरु र संस्थापकहरु नै एउटै परिवारको सदस्यहरु भएको अवस्थामा शिक्षकहरु किन आन्दोलनमा भन्ने सवाल गहिरो हुँदैछ । यस्तो हुनुमा को जिम्मेवार भन्ने सवालमा फ्याट्ट एउटालाई अर्थात् कि त शिक्षकलाई कि त सं...
साउन महिनामा भक्तजनहरु व्रत बसी शिवालयहरुमा पूजाअर्चनाका लागि जाने प्रचलन छ। आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार हो तर, यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण शिवालयहरुमा भक्तजनको उपस्थिति कम रहेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीहरुका लागि खुला गरिएको छैन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदिप ढकालका अनुसार मन्दिर बन्द नै रहे पनि केही भक्तजनहरु मन्दिर बाहिरबाटै दर्शन गरेर फर्किरहेका छन्। बिहानदेखि ...
महोत्तरी । पाउदेखि कम्मरसम्म घाउ नै घाउ छ। घाउ पिलिएर सहिसक्नु छैन। उपचार गर्न मन छ तर खर्च छैन। यस्तै पीडाले छटपटाइरहेकी छन्, १६ वर्षीया मञ्जुकुमारी ठाकुर। लाउँलाउँ, खाउँखाउँ भन्ने उमेरमा मञ्जु तीन वर्षदेखि ओछ्यानमै थला परेर बसेकी छन्। उनी कसरी यो हालतमा पुगिन् त ? घटना तीन वर्षअघिको हो। जलेश्वर नगरपालिका–१२ नैनहीकी मञ्जु १३ वर्षकी थिइन्। उनी मामाघर गइन्। दीपावलीको उल्लास थियो। घर लिप्ने माटो लिन...
इनरुवा । जब मानिसलाई साह्रै ठूलो संकट आईपर्छ तब उसले कसै न कसैको सहारा खेज्दछ । यस्तै संकट निम्यतएको कोरोना कहरलाई नियन्त्रण गर्न इनरुवाबासीको सहारा बन्यो इनरुवा नगरपालिका अर्थात इनरुवा स्थानीय सरकार र तत्काल नयाँ बसपार्कमा क्वारेन्टाईन स्थापना गरियो ।आहतमा राहत स्थानीय सरकारको हात भन्ने मान्यतालाई तत्काल नागरिक सरोकारको बिषयलाई सम्वोधन गरेको इनरुवा नगरपालिकाले त्यसपछि क्रमस क्वारेन्टाईन बिस्तार ग...
सोमबार, आषाढ ०८, २०७७
आज वर्षको दोस्रो चन्द्रग्रहण लाग्दै
शुक्रबार यो वर्षको दोस्रो चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । यो ग्रहणलाई दक्षिण एशियाबाट पनि देख्न सकिनेछ । यसअघि १० जनवरीमा वर्षको पहिलो चन्द्रग्रहण लागेको थियो । आजको चन्द्रग्रहण शुक्रबार राति साढे ११ बजेबाट शुरु हुनेछ र शनिबार बिहानी २ बजेर ४९ मिनेटसम्म जारी रहनेछ । १ बजेर ९ मिनेट जाँदा यस ग्रहणको प्रभाव सबैभन्दा धेरै रहने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । यो ग्रहणलाई एशिया, युरोप, अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट हेर्न ...